Khayre oo Nin Sirdoon ah u magacaabey xil sare | Keydmedia
Khayre oo Nin Sirdoon ah u magacaabey xil sare
Qooraansay ayaa ka hoo shaqeyn doono Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka & Guddiyadii dhisnaa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sarkaal katirsan hay'adda Sirdoonka iyo Nabad Sugida ee NISA u magacaabey xil sare, iyadoo go'aankiisa uu dhaliyay su'aallo badan oo dadka ay waydiinayaan.
Qoraal kooban oo uu boggiisa Twitter-ka soo dhigay ayuu Khayre ku shaaciyay in uu Mukhtar Xuseen Maxamed (Qooraansay) u dhiibay jagada Maareeyaha Mashruuca Aqoonsiga Qaranka, si uu usoo dhiso hay'adda Aqoonsiga Qaranka (National ID Authority).
Lama oga in Qoraansay uu iska casilay xubinimada NISA.
Madaxda dowladda ayaa lagu eedeeyaa inay inta badan dadka ay xilalka u magacaabaan ay yihiin kuwa ku qabiil ah ama taageersan fekerkooda, waxaana taasi meesha ka saartay in muwaadiniinta si siman ugu tartamaan xafiisyada qaranka loogu adeego.
Hay'adda NISA waxaa ka buuxa xubno kasoo baxay Al-Shabaab, kuwaasoo la aaminsan yahay inay labo kaarle yihiin, oo labada dhinacba la shaqeeyaan. Dhexgalka Al-Shabaab ee hay'adaha dowaldda ayaa sabab u noqotay qaraxyada iyo dilalka Muqdisho inay kordhaan.